musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Mapurisa Anotakura COVID-19 Varwere
Hurumende Nhau • Health News • nhau • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Pattaya Mapurisa - Mufananidzo wakapihwa naPattaya Mail
Nongprue Police Station muPattaya, Thailand, yakamisikidza vasungwa vayo kutakura mota kuenda kuchimbichimbi kutakura kwevarwere veCOVID-19, ichiwedzera zvimwe zviwanikwa kuamburenzi system yakazara neakakomba mafoni.
COVID-19 kesi dziri kuwanda muPattaya neanopfuura mazana matatu ataurwa nhasi, Chipiri, Nyamavhuvhu 300, 3.
Maamburenzi echipatara nemavans anga achimhanya kutenderera nguva yekutakura varwere veCOVID-19 vanorwara zvakanyanya.
Mapurisa ari kupindura kune avo vakamirira mibhedha yezvipatara nekuvatakura kana yawanikwa.
Nezviitiko zvezuva nezuva zvecoronavirus muPattaya zvichikwira pamusoro pe300 nhasi, Chipiri, Nyamavhuvhu 3, 2021, mapurisa ave kutanga kuendesa varwere ku Banglamung Hospital.
Maamburenzi echipatara nemavans anoshandiswa neSawang Boriboon Thammasathan Foundation anga achimhanya kutenderera nguva yekutakura vanorwara zvakanyanya COVID-19 varwere nevaya vakamirira mibhedha.
Nongprue Mapurisa Mukuru Pol. Col. Chitdecha Songhong naPol. Lt. Col. Kengsart Nuanpong vakapindura nezuro, Nyamavhuvhu 2, kuWinton Village kuNong Krabok Soi 10 uko mukadzi ane makore 71 ekuberekwa akafema mweya anga akamirira mubhedha ku Banglamung Hospital. Imwe yakazovhurwa musi uyu.
Dunhu reBanglamung, kusanganisira Pattaya, rakamhan'ara 314 nyowani dzeacoronavirus neChipiri apo Chonburi yakarova imwe rekodhi nezvirwere 1,359.